Waa kuma Xil: Nuux Maxamed Xuseen?
Monday February 12, 2018 - 11:28:51 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Anigoo ’ Fadxi Garaad Ciise’ ah waxaan maanta qalinka u qaatay inaan qoraal kooban ku cabiro shaksiyada dahabiga ag ee xil: Nuux maxamed xuseen
Xildhibaan: Nuux maxamed xuseen waa dhalinyarda xildhibaan gole deegaaneedka gobolka togdheer kusoo baxay ee hirgashay ama qabsoontay sanadkii 2012-kii kaasoo uu ka sharaxnaa xisbiga Kulmiye.
Waxaanu kusoo baxay caddad tiro codeed oo tii ugu badneyd oo ah ( 5000) cod kaasoo uu ku hogaaminaayay dhamaan xildhibaanada kale ee uu kula jiray tar-tanka, kuwaasoo ugu dambeyn ay guuleysteen , (21 ) xildhiban gole-deegaan oo hadda ka hawl-gala gobolka togdheer
Waxaanu ku dhashay magaalada burco waxaanu sidoo kale ku bar-baaray isla magaalada burco,
Xil: Waxaanu sidoo kale waxbarashadiisa heerarkii kala duwanaa uu ku qaatay isla magaalada burco.
Waana arrin aad ka turjumanayso tuulo miyi illaa min heer gobob jacaylka loo qabo.
Kadib doorshadii waxa uu xambaartay magaca iyo xilka xildhibaan-nimo, oo uu ku helay sidii milgaha iyo maamuuska lahayd ee ay ugu codeeyeena bulshada todheer miyi ilaa magaalo .
Xil: nuux waa madaale dadaal badan oo dad iyo dal jacayl badan
Illeen wadani daacadi ma qarsoomee, waxa uu shaqooyin waxtar leh u qabtay, qaranka iyo ummada sharafta leh ee Somaliland-ba, kana qabtay degmooyinka- iyo deegaanada gobolka togdheer. Isagoo ay ka go’nayd danaynta, dadka iyo dalka danahooda wax-qabad.
Waxaanu wax badan oo wax ku oola kusoo kordhiyay nidaamka shaqo ee geedi socodka horu-marka gobolka tan iyo markii uu hantay kusriga xildhibaanimo
Waxaana ka mid ah wadooyin badan oo Halbowle- u ah gobolka togdheer oo uu hir geliyay, xarumo caafimaad oo uu geeyay agab caafimaad oo muhiim ah deegaano ka mida gobolka togdheer, sidoo kale agab waxa barasho uu uu geeyay goobo wax- barsho oo ku yaalla togdheer.
Illaa iyo haatana waa uu wadaa dedaalkaa wax-qabad ee uu bulshada wax ku tarayo
Mana aha mid uu joojinanyo.
Waxaanu sidoo kale gacan weyn uu ka geystay abaartii mahadhada ahayd ee aan loo kala hadhin taasoo ka dhacaday geyiga Somalida badhtamihii 2017-kii , isagoo caawimooyin iyo deeqo raashin , biyo’ iyo hu’ ba isugu jira oo hor leh ka gaystay ,deegaano kamida Somaliland taasoo ahayd waajib qaran iyo mid bini-aadantimo.
Waxaanu ka mid yahay shakhsiyaadka laf-dhabarta u ah xisbiga xaakimka- kulmiye ee gobolka togdheer.
Sidoo kalena waxaa uu halgan iyo door weyna ka ciyaaray guushii kulmiye ee musharax muuse biixi cabdi.
Xil: nuux waa shaqsiyaa dhif iyo nadir ku ah’ bulshadeena waa nin dabeecad wanaag diin, deeq, dadnimo u saaxiib ah. Waxaanu ahaa dadkii jaanta iyo jiibta raacshay xukuumada curatay 13-kii Dec. Ee uu hogaaminayo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi . waa hayin hoodaale biyo madaadshe’ ah.
Hufnaanta shaqo ee ay ku dheehantahay hawl karnimada shakhsiyadeed waa mida uu ku hantay quluubta bulshada kala gedisan ee gobolka togdheer. mana aha shakhsi ka mucaarada media ha sida muuq-baahiyaasha, cod-baahiyaasha iyo qoraal-baahiyaasha, waa shakhsiyad af-gaaban oo talo qabeena.
Geba-gebadii odhaahdan kooban ee aan ka idhi xildhibaanka xushmada mudan ee Nuux Maxamed Xuseen maaha Ammaan odhaaheed waa arin xaqiiqi ah oo waadixa waxaana marag ka ah
Bulshada sharafta badan ee gobolka togdheer.
Cont:aqoonyahanfadxi@gmail.com or+252 63-4001631